Vaovao - Expo momba ny hatsaran-tarehy any Sina
China International Beauty Expo (Guangzhou), natsangana tamin'ny 1989, dia nantsoina hoe Canton Beauty Expo. Ny varotra indostrian'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy malaza eran-tany dia misy hatsarana matihanina, fikolokoloana volo sy fikolokoloana, tarehy, fikolokoloana manokana, ary rojom-bidy farany ambony. Ity no taona faha-30 taonantsika ho iray amin'ireo mpikarakara fampiroboroboana ny indostria hatsaran-tarehy lehibe indrindra eto an-tany. Ny sehatra CIBE dia mbola miasa irery miaraka amin'ny fanohanan'ny All-China Federation of Industrial & Culture Beauty Culture & Cosmetic Chamber. Nandritra ny telopolo taona lasa izay, ny iraka ataon'ny CIBE dia ny hamelona tontolo iainana mahasalama sy mifaninana ary sehatra varotra matihanina maharitra ho an'ny indostrian'ny hatsaran-tarehy any Shina. Ny CIBE dia manohana orinasa kely sy salantsalany, mamboly marika nasionaly, manampy ny orinasan-tarehy hatsaran-tarehy hitombo ary hiakatra amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena, mampiditra marika iraisam-pirenena amin'ny tsenan'i Sina, ary ahafahan'izy ireo mahazo fahatsapana ara-kolontsaina sy fahatakarana feno ny tsenan'i Sina.
Ny foara lehibe indrindra sy feno indrindra ao Shina
China expo hatsaran-tarehy iraisam-pirenena dia manangona ireo vokatra avo indrindra eto an-tany, manarona ny rojom-pandraharahana iray manontolo (Beauty tarehy, kosmetika, akora sy fonosana, vokatra fikolokoloana tarehy, masinina fikarakarana hoditra, fitaovana diagnostika fikarakarana hoditra, kosmetolojia fitsaboana) ho an'ny fampandrosoana mandroso .
Ity dia fampirantiana hatsaran-tarehy matihanina, manatrika isan-taona ny MEICET.
Ny tsy itovizany tamin'ny taon-dasa dia ny amin'ny Meicet mitondra ny vokatra farany -------Mpanadihady sary amin'ny hoditra ISEMECO.
ISEMECO Skin Image Analyzer no sary mihetsika voalohany eran-tany Portrait Screen Diagnostic Device ho an'ny hopitaly dermatology sy hopitaly cosmetology.
Fampirantiana hatsaran-tarehy iraisam-pirenena any Sina (GuangZhou) 2020.
Fotoana: 4 Sep hatramin'ny 6 Aogositra 2020.
MEICET eto ary miandry anao.